HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraRomania waxay door bidaa laamaha Nidaamka Tareenka ee Turkiga
22 / 11 / 2019 06 Ankara, 16 Bursa, 40 Romania, Gobolka Central Anatolia, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
romania turk waxay door bidaa magacyada nidaamka tareenka
Ka dib markii basaska maxalliga ah ee dhowaan loo dhoofiyay Romania, shirkadaha Turkiga ayaa hadda bilaabay inay u dhoofiyaan gawaarida nidaamka tareenka Romania. Durmazlar ve Bozankaya Waxaa lagu soo rogay amarrada nidaamka tareenka ee Roomaaniya. Waxaan siineynaa inka badan 130 taraamyada Bucharest, Laşi iyo Timişoara. Lacagtani waa laba jeer tirada gawaarida ee ay horey magaalooyinka magaalooyinku Romania ku amreen shirkadaha reer Yurub.
DurmazlarKu guuleystey hindisada ugu weyn Romania. Shirkadda Turkiga ayaa ku guuleysatay tartankan iyada oo ay iska kaashadeen CRRC (Shiinaha) iyo Astra Vagoane Călători (Romania). Natiijo ahaan, Durmazlar 100 wuxuu siin doonaa taraamyada dabaqa hoose ee caasimada Bucharest. Qiimaha heshiiska ayaa ka badan 180 milyan oo yuuro.
Soo-saare kale oo taraam Turkish ah Bozankaya waxay soo saari doontaa 16 trams dabaq cusub oo hoose oo loogu talagalay magaalada Iaşi. Iyada oo jilcan, BozankayaMarka laga reebo Pesa, soo saaraha caanka ah ee Poland ee baabuurta xadiidka. Qiimaha hindisada ayaa ah qiyaastii 30 milyan oo yuuro. this Bozankayaahayd hindisada labaad ee Romania.
Bozankaya wuxuu hore uga dalbaday taraam 16 magaalo kale oo Roomaania ah, Timişoara, wuxuuna ka tegey Polish Pesa. Xaraashka sidoo kale waxaa ku jira ikhtiyaar dheeraad ah oo ah 24. Sida ku xusan qeexitaanka, taraamyadu waxay ku ordi karaan wadooyin aan koronto lahayn masaafad ka badan kiiloomitir 60. Bozankaya 33 sarrifka million-euro in Turkey la mashruucan siin doona talooyin. Iyada oo la adeegsanayo xulashada dheeriga ah ee 24 ee heshiiska, wadarta dhoofinta ayaa dhaafi doonta 80 Million euro.
Markii aan safar ganacsi iyo dalxiis ku tagno Romania, waxaan qaadaneynaa basaska Turkiga iyo nidaamka tareenka. Degmooyinka Turkiga.
Bozankaya ve Durmazlar Waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo shirkadeena oo u rajeynayaa inay sii wadaan dhoofinta dhoofinta leh ee guusha leh.
Soo-saaraha xamuulka Turkiga
Nidaamka Tareenka ee ay ku guuleysteen Shirkado Turki ah oo ka socda Suuqa Adduunka